Fitaovana an-dakozia an-dakozia 2-tantanana amin'ny sisin-tsifitra
Home / Fitaovana an-dakozia / Faucets lakozia ao an-dakozia / WOWOW 2-Fitaovana an-dakozia an-dakozia amin'ny lakozia miaraka amina sisin-tsifotra
WOWOW 2-Tazom-baravarankely an-tsambo mitazona an-tsambo
Ny faucine varahina vita amin'ny sisintany dia vita amin'ny varahina matevina mba hahazoana antoka ny kalitao sy ny faharetana. Ny famandrihana kalitao avo lenta koa dia manome antoka fa ny vatanao an-dakozia dia afaka manohitra ny fanodikodinana na fanakorontanana. Mety hanimba fotsiny izany rehefa mifidy birao an-dakozia izay tsy hanana fehezanteny mitovy. WOWOW dia mihoatra ny fenitry ny indostria rehetra ary ny outperforms saika misy marika A-marika.
Mba hamaritana ny sandan'ny vola omenay anao, dia tsy matahotra ny hanome anao mandritra ny 5 taona ny WOWOW. Ny ankamaroan'ny mpamatsy, na ireo marika A-marika aza, dia manome alàlana mandritra ny 1 taona ihany. Raha potika ny grosinao an-dakozia amin'ny herintaona, dia loza ho anao manokana izany. Ary mila mividy boaty vaovao ho an'ny lakozia vaovao indray ianao. Aty amin'ny WOWOW dia tsy mahita izany ara-drariny izany isika, satria ny faucaux an-dakozia dia tokony haharitra 5 taona fara-fahakeliny. Izany no antony hanomezan'ny WOWOW anao izao fotoan-tsarotra tsy misy an'io mandritra ny 5 taona. WOWOW dia resy lahatra momba ny bodofotsy varahina any an-dakozia, fa manome tolotra 90 andro ianao. Haverinao ny volanao, famerenam-bola feno, raha tsy ho taitra amin'ny vidiny ny vola entinao miaraka amin'ny faucum varahina WOWOW. Ity vola miverina amin'ny vola ity dia manaporofo ny fahatokisanay amin'ny poketra varahina any an-dakozia! Ny tombony azo amin'ny sakam-bolan'ny varahina amin'ny fomba fohy:
SKU: 23115A1 Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Faucets lakozia ao an-dakozia Tags: 8 mirefy, Bridge, Vintage